वडाध्यक्ष तुम्बापोको निधन - Everest Dainik - News from Nepal
पाँचथरः जिल्लाको फिदिम–५, का वडा अध्यक्ष लीलाराज तुम्बापोको शुक्रबार मृत्यु भएको छ । उनको झापाको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पतालमा उपचारको क्रममा शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो ।
तुम्बापोको रक्त अल्पताका कारण मृत्यु भएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
वडा अध्यक्ष तुम्बापो केही साता अघिदेखि अस्वस्थ बनेका थिए । उनी सुनसरीको धरानस्थित बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराएर बुधबार मात्र घर पुगेका थिए ।
स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि घर फर्केका उनी बिहीबार बिहान अचानक बेहोस भएका थिए । त्यसपछि उनलाई फिदिमस्थित समर्पित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि सोहि दिन साँझ उनलाई हेलिकप्टर मार्फत बी.एण्ड सी. अस्पताल लगिएको नेकपा फिदिम–५, का अध्यक्ष अबिनाश तुम्बापोले बताए । उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिए पनि शुक्रबार दिउँसो निधन भएको हो ।
३५ बर्षीय तुम्बापो गत स्थानीय तह निर्बाचनमा नेकपाको तर्फबाट फिदिम–५, को वडा अध्यक्ष निर्बाचित भएका थिए । तुम्बापो राष्ट्रिय युवा संघ, पाँचथरका सह–संयोजक रहेका थिए ।